အလွန်တရာလှပသော Yamato စကားလုံးတို့၏အဓိပ္ပါယ် !!! - JAPO Japanese News
အလွန်တရာလှပသော Yamato စကားလုံးတို့၏အဓိပ္ပါယ် !!!
ဟူး 21 Oct 2020, 13:18 ညနေ
ဂျပန်မှာဂျပန်စကားကိုပဲအဓိကအသုံးပြုနေပေမဲ့၊ ဂျပန်ဘာသာစကားမှာလည်းအမျိုးမျိုးသော စကားလုံးအသစ်တွေပေါ်လာပြီး မျက်မှောက်ခေတ် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာပါတယ်။ တိုင်းတစ်ပါးကနေရောက်လာတဲ့ စကားလုံးတွေကိုတော့ 外来語 がいらいご　လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပုံစံအသစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့စကားလုံးသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေးကာလကတည်းကအသုံးပြုလာကြတဲ့ Yamato စကားလုံးတွေရယ် 和語（わご）လို့ခေါ် တဲ့စကားလုံးတွေက ရှိပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိအသုံးပြုနေတဲ့ ဒီစကားလုံးတွေထဲမှာ အံ့သြစရာကောင်းအောင်အလွန်လှပတဲ့စကားလုံး၊ နက်ရှိုင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဆောင်တဲ့စကားလုံး စသဖြင့်အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။
ယေဘုယျသုံးတဲ့ဒီဘက်ခေတ်စကားမှာတော့ 〝お待ちしています”လို့ပြောကြပေမဲ့၊ とても楽しみにしている ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုပါတယ်။
နှလုံးသားရဲ့ အတွင်းဆုံးကနေပျော်ရွှင်စွာနဲ့စောင့်နေမယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒီစကားကိုကြားရတဲ့တစ်ဖက်လူကလည်း ပျော်ရွှင်သွားရပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ထပ်ခါထပ်ခါသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်မလေးနက်တော့တဲ့အတွက် အထူးကရုစိုက်ရပါမယ်။
စသည်ဖြင့်အသုံးပြုကြပေမဲ့၊ ဒါထက်ပိုတာမရှိဘူးဆိုတာကြောင့် အကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဒါကိုလည်းထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုလိုက်ရင် နောက်ထပ်ပိုပြီးကောင်းတာရှိတာပဲနော်? လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တူသွားတာကြောင့် သတိထားရပါမယ်.
ကိုယ်ကြောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို မဖြစ်မနေemail နဲ့စာအရှည်ကြီးတွေပို့ရတဲ့အခါမှာ ဒီစကားလုံးကိုပထမဆုံးစာကြောင်းမှာထည့်သုံးကြည့်ပါလား?
“ 大変申し訳ございませんが、お手すきの時にご確認いただけましたら幸いです。 “
胸に響く （むねにひびく）လို့လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ ရင်ကိုပြင်းထန်စွာလှုပ်ခတ်ရလောက်တဲ့အထိစိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ခံစားရတဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုပါတယ်။
နောက်ထပ် နည်းနည်းပိုပြီးအံ့သြသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ “胸に染みる” Mune ni shimiru လို့သုံးမယ်ဆိုလည်း သင့်တော်ပါတယ်။
အရမ်းလှတဲ့စကားလုံးပါ။ အသုဘတွေမှာသုံးတဲ့စကားဖြစ်ပြီး ပျော်တဲ့နေရာမှာသုံးလိုမရတာကြောင့် သတိကြီးကြီးထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံး သဘောတူညီလိုက်တာကြောင့် တရားဝင်စာချုပ်ဖြစ်သွားပြီနော်…ဆိုပြီးအသုံးပြုပါတယ်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်သဘောတူညီလိုက်တာကြောင့်၊ 折り紙ကိုခေါက်လိုက်သလိုမျိုး တစ်ဖက်လူရဲ့စကားမှာ 合意သဘောတူညီမှုပေးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်.
မခြွင်းမချန် အားသွန်ခွန်စိုက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကိုသွားနေတယ်။ … ဆိုပြီးအသုံးပြုပါတယ်။
အင်အားရှိသမျှကြိုးစားမယ် ！ဆိုတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်နော်…
ဒီပရောဂျက်ကို အောင်မြင်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သေချာပေါက် အားထည့်ပါ။ ဆိုပြီးသုံးပါတယ်။
ညင်ညင်သာသာပြောရင်တော့ “助けてね”(ကူညီပေးပါ)လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့အပြင်၊ ယဥ်ကျေးတဲ့စကားပြောပုံဖြစ်တာကြောင့် စကားလုံးလည်းလှပါတယ်။
၅ လပိုင်း၊ ၆ လပိုင်းဟာ ဂျပန်မှာတော့ မိုးတွင်းအချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။
မိုးတိတ်သွားပြီလို့ထင်ပေမဲ့ ထပ်ပြီးရွာလာတယ်။ ဆိုတဲ့အခြေအနေကနေထွက်လာတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် ခဏခဏဖြစ်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နေကမှောင်လာတယ်၊ ညနေမှောင်ရိပ်ပျိုးချိန်ကို ပြောတာပါ။
အရမ်းလှတဲ့ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ပုံမှန်သဘောမျိုးအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်တယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါကတစ်ဖက်လူကလုပ်ပေးတဲ့ တုန်လှုပ်စေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားပါ။
ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုကိုရရှိတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ဆိုပြီး အသုံးပြုပေမဲ့..ကိုယ်ကသူတစ်ပါးကို ဧည့်ခံတဲ့အခါမှာတော့ လုံးဝအသုံးမပြုပါဘူး။
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုတော့ နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ပြီး ဒီလိုပြောပါတယ်.
(ကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့အရာက သိပ်ပြီးမကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အားနာပေမဲ့၊ စိတ်အပြည့်ထည့်ခဲ့ပါတယ်။) ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ သိပ်ပြီးမတွေ့ရတော့ပေမဲ့၊ ယခင်မိန်းကလေးတွေကျိုးနွံသိမ်မွေ့ပြီး ထိုအချက်ကဂျပန်မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှတရားထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ကျေးဇူးပဲလို့ပြောချင်ပေမဲ့ အားလည်းအားနာတယ်.. ဒီလိုအခြေအနေမှာအသုံးပြုပါတယ်။
ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်ကိုတိုင်ဂုဏ်ယူပြောနေတာထက် သူတစ်ပါးကပြောပါစေ။ တစ်ကွက်ထိမ်ချန်လိုက်ပြီး ကျိုးနွံတတ်တာဟာ ဂျပန်ဆန်မှုတစ်ခုပါပဲ..
နောက်ပြီးတစ်ဖက်လူရဲ့အကြောင်းကိုတော့ ကိုယ်ကယဥ်ကျေးစွာနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြတာလည်း ဂျပန်ရဲ့ယဥ်ကျေးမှုပါပဲ…
ဒီနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေ သိပ်ပြီးမသုံးတော့တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတာကြောင့် ဒီစကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆို အနည်းငယ်လူကြီးဆန်နိုင်ပေမဲ့၊ အရွယ်ရောက်သူတို့ပြောတဲ့စကားအနေနဲ့ ပုံမှန်ကဲ့သို့အသုံးပြုလာကြမယ်ဆိုရင်တော့ အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိသူတွေဖြစ်လာမှာပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၂၀ မတိုင်ခင်က ကွန်ဒုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ !!!
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတွေကဘာလဲ ?
「どうもこうも」ဆိုတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဂျပန်စကားပုံ!!!
အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှိတဲ့ ကလေးက Tsugaru Ben စကားကိုမပြောနိုင်ဘူး ?